Izintaba Zentaba: Umhlahlandlela Ophelele Wokuzala (Usayizi, Imidlwane Nesimo Esibucayi) - Izinhlobo
I-Mountain Feist iyinja yangempela yamaMelika wonke!
Imvamisa kuyiphutha ngokuthi i- Ukuhlanganiswa kukaJack Russell Terrier , lezi zinja zaqala ukufuywa zisuka eTerriers eMelika.
Ekuqaleni kwekhulu leminyaka le nja yayingandile ngokwedlulele, kepha nokho kuleli shumi leminyaka lezi zinja seziqala ukubuya ngenxa yokuthandwa kwazo njengesilwane sasekhaya.
Akufanele kudidaniswe ne-Mountain Cur enkulu, le nja esebenzayo iyisilwane esihle semindeni esebenzayo nasemakhaya.
Ake sibheke kangcono le nja yokusebenza eyingqayizivele ngokuningiliziwe nomhlahlandlela wethu ophelele wokuzala.
Isifinyezo Sesizalo Sentaba
Usayizi Amasentimitha angu-14 kuya kwangu-18 ukuphakama
Isisindo 12 kuye ku-30lb
Isikhathi sokuphila 13 - 18 iminyaka
Uhlobo Lokuzala Inja Yokuzingela Nesihlahla
Inhloso Ratter / Terrier
Ifanele i- Imindeni esebenzayo, ama-Singles, noma ama-Couples
Ukuhluka Kwemibala Khanya Brown, Mnyama, Brindle, Isiliva, Ukhilimu, Sable, Luhlaza, Bomvu, Fawn, Mpunga, Mhlophe
Isimo Inelukuluku, Inobuhlakani, Iyasebenza, Inomsindo
Amanye Amagama I-American Feist, iTerrier Terrier
I-Mountain Feist: Umhlahlandlela Wokuzala Izinja
Intaba Feist Origin
Intaba Yezintaba Zentaba
Intaba Yesimo Sezulu
Ingabe Ziyizinja Ezihle Zomndeni?
Umhlahlandlela Wokunakekela: Ukuphakela, Ukuvivinya umzimba nokuzilungisa
Ukuvivinya Inja Yakho
Ukubukeka Kwezintaba Zentaba (Umbala, Ijazi nokuzilungisa)
I-Mountain Feist inomlando ongaziwa kakhulu; igama elithi 'feist' elisho okuncane, inja enomsindo yanoma yisiphi isitayela sohlobo .
Ngokuhamba kwesikhathi, Ukuhlukaniswa kohlobo lweFist kuhlanjululwe ukufaka izinhlobo ezimbalwa zezinhlobo , kufaka phakathi inja ye-Mountain Feist.
Njenge-Mountain Cur, lezi zinja zaziwa njengezinja ezihlahla izihlahla .
Lokhu kusho ukuthi isitayela sabo sokuzingela silandela izilwane emhlabathini ngokungafani nokuzimba njengeDachshund .
Ngenxa yalokho, i-Mountain Feist inedrayivu eyedlulele yokujaha: izingwejeje, onogwaja namagundane.
Le yinto okufanele uyiqaphele lapho ubheka enye yalezi zinja njengesilwane sasekhaya, uma seziholile, kunzima kakhulu ukuzikhuthaza ukuthi zibuye.
Yaziwa yi-United Kennel Club (UKC) ne-American Kennel Club (njenge-Foundation Stock Service) le nja iyinja encane yokuzingela enezidingo eziphansi zokunakekelwa.
I-Mountain Feist ingeyomdabu eziNtabeni i-Ozark eMissouri, Arkansas, Kansas nase-Oklahoma.
Kuyamukelwa ngokujwayelekile ukuthi i-Mountain Feist ibilokhu ikhona kusukela ekuqaleni kwamaphayona aseMelika (ngekhulu le-17 kuya kwele-18).
Izinja ezinamandla ekuqaleni ezifuyelwe ukuxosha izilwane ezincane njengezingwejeje.
Lezi zinja bezilokhu zikhona kusukela ngekhulu le-17 nele-18 futhi ziye zabonwa ngabantu abadumile, okubandakanya u-Abraham Lincoln noGeorge Washington.
Imidlwane yeMountain Feist ibiza phakathi kuka- $ 300 kuya ku- $ 500 USD lilinye.
Idamu (umama we-puppy) imvamisa liba nemidlwane emihlanu kuya kweyisishiyagalombili kudoti ngamunye.
Izinja zeMountain Feist zivame ngendlela engajwayelekile, futhi uma zisekhosombeni evame ukuphutha ngezinye izinhlobo .
Ungakuthola kunzima ukuthola umfuyi onedumela elihle, noma uthole enye yalezi zinja endaweni yokukhosela.
Kunamaqembu okusiza abanzi kuzwelonke njengeFist Rescue USA Kodwa-ke, lezi zinhlangano zikhosela zonke izinhlobo ze-Feist ukuze zamukelwe (hhayi nje i-Mountain Feist).
Kukhona uhlu lwabazalanisi abasebenzisanayo be-UKC, kepha-ke laba balimi abahloliwe ngaphambi kokuba babhaliswe ngakho-ke qaphelani noma ibaphi abalimi be-puppy-farm.
I-Mountain Feist ivame ukubizwa “njengenye yezinja zokugcina ezizingelayo” ngabalandeli nabanikazi bohlobo.
Bayizinja ezinothando nezinikele, ukubopha ngokuqinile nomnikazi nomndeni wabo.
Ulaka alukho esimeni ngalolu hlobo lohlobo.
Uma nje izidingo zabo zokuzivocavoca zifeziwe, Izinja ze-Mountain Feist ziyakwazi ukuzivumelanisa nezimo futhi zingakhula kakhulu kunoma iyiphi imvelo.
Kubaluleke kakhulu ukugcina i-Mountain Feist yakho imatasa.
Ngenkathi bezothokozela isikhathi esithile sokuphumula kanye nokubuthisa elangeni, lezi zinja ziklanyelwa ukusebenza, futhi lokhu kushayelwa kusho ukuthi abakuthokozeli ukungasebenzi isikhathi eside.
Isithukuthezi singakhula ngokushesha izinkinga zokuziphatha ngalolu hlobo lohlobo. Gcina i-Mountain Feist yakho imatasa ngaso sonke isikhathi, kungaba imidlalo, ukudlala, ukuhamba noma ukuqeqeshwa.
Izintaba Zentaba, ngokungafani nezinye izinja ze-terrier , abaziwa njengabanolaka noma abangazinaki ezinye izinja.
Lezi zinja zinobudlelwano nomphakathi, futhi zingakhula ezimweni zokupakisha ziqhubeke kahle nezinja zabo bonke ubujamo, osayizi namaqembu ezizalo.
Esinye sezizathu esenza iMountain Feist icwebezele izingane isimo sabo sokudlala .
Lezi zinja zithanda umdlalo omuhle, kungaba ukudonswa kwempi, ukujaha, ukulanda noma ukucasha nokufuna.
Lokhu kubenza bathandane nezingane, ikakhulukazi labo abathanda ukudlala nabo!
Ngenkathi izinja zeMountain Feist ziluhlobo olunobungane kakhulu futhi zingasebenzisana kahle nezingane, umuzwa wabo wokujaha izinto phezulu ezihlahleni kusho ukuthi azizinhle kangako ngamakati. Ngakho-ke, uma unomngane we-feline ekhaya, lokhu kungahle kungabi ukukhetha okuhle komngane we-canine.
IMount Feist Mix Dog (osesithombeni)
I-Mountain Feist akuyona inja enhle okokuqala kubanikazi, noma abanikazi abangahambi kakhulu emakhaya.
Lezi zinja ziyimidlwane eqinile, futhi ziyathanda ukuba matasa noma ukusebenza. Noma ngabe bayisilwane sasekhaya, futhi bengenawo umsebenzi osebenzayo, kufanele babe:
Ngenxa yalokho, azenzi kahle ngokungasebenzi , futhi uma ungenalwazi ngokuphatha inja noma ukude kakhulu kufanele ucabangele olunye uhlobo lwenja.
Umhlahlandlela Ama-calories angu-400
Bayizinja ezikhuthele futhi ngenxa yalokho badinga indlela yokudla ebanikeza amandla ezinga lomsebenzi wabo.
Lapho ukhetha ukudla kwenja, kungakhathalekile ukuthi hlobo luni, qiniseka ukuthi uyaluqonda uhlobo lokudla okudlayo.
Imithetho ithi zonke izithako (kanye neqembu elihlosiwe lenja yobudala) kumele zibe khona kumalebula okudla kwezinja ukwenza kube lula kumthengi ukuthi aqonde ukuthi yini ayondla inja yakhe.
Ngokuya ngezinga lomsebenzi wenja yakho, bazodinga izinkomishi zokudla ezi-1 kuye ku-1.5 usuku lonke (noma okulingana nazo).
Njengomphumela wemvelaphi yazo (izinja ezisebenzayo eSouthern United States) Izintaba Ezisentabeni azidli ngokuxokozela, njengoba ngokwesiko zazizokhuliswa ngezicucu zetafula.
Ngenxa yalokho, kungaba ngcono ukondla i-Mountain Feist ukudla kwe-BARF (“amathambo nokudla okuluhlaza”). Uma uthatha isinqumo sokondla okuluhlaza, qiniseka uyayiqonda imihlahlandlela yokondla .
Noma yini onquma ukuyondla nge-Feist yakho, kubalulekile ukuyenza qiniseka ukuthi ayinakho okusanhlamvu njengoba izinja zingakwazi ukugaya ama-carbohydrate ngendlela efanayo nabantu, futhi ngenxa yalokho akufanele itholakale ekudleni kwabo.
Lolu hlobo lwenja lwakhuliselwa ukuzingela nokujaha izingwejeje, ngenxa yalokho bayathanda ukuba ngaphandle futhi basebenze.
Yize bechuma njengenja esebenzayo, benza kahle kakhulu njengezilwane ezifuywayo ezihamba nabo nezomndeni futhi, inqobo nje uma bethola imizuzu engama-60 yokuzivocavoca usuku ngalunye.
Lapho uhamba ngeNtaba yakho Yezintaba, kunconywa ukuthi agcinwe kwi-leash (ngaphandle kokubiyelwa ezindaweni ezinjengamapaki ezinja), ngenxa yokuthambekela kwakhe ekusukeleni izinto mhlawumbe angabuyi! Uzodinga sebenza kanzima ngokubizwa kwakhe kabusha .
Uma ungumuntu othanda ukugijima, ungakujabulela ukugijima uhambe nenja yakho.
AbakwaMountain Feists bangenza kahle ukuthi babe nendawo encane engaphandle abangakwazi ukuzilolongela kuyo. Kodwa-ke, lokhu akuyona imfuneko yalolu hlobo, uma nje bengathola imizuzu engama-60 yokuzivocavoca nsuku zonke, banganeliseka ngokuphelele.
Lezi zinja ziyasebenza ngokomzimba nangokwengqondo, zidinga ukujabulisa njalo.
Abanikazi beMountain Feists babika amazinga aphezulu empumelelo ngemidlalo ye-canine efana ne-agility noma i-flyball. Uma ufuna umdlalo wokuzilibazisa omusha, kungaba umqondo omuhle ukubheka iligi yendawo.
Okufanekisiwe yi-Mountain Feist Mix Dog (Mountain Feist x Beagle Mix)
Izintaba Zentaba aziwa njengezinja ezihlakaniphile .
Ngokushesha njengesiswebhu, imvelaphi yabo njengezinja zokuzingela ibavumela ukuba bafunde ngokushesha nasekuhambeni.
Ungakuthola kunzima ukuqeqesha ngaphandle ngenxa yemvelo yabo yokuzingela , bangaphazanyiswa iphunga elimnandi noma ikati elidlulayo!
Ukubekezela ngenkathi ukuqeqesha inja yakho kuzoba phambili ngoba lokhu kuzochaza ubuhlobo bakho bokusebenza nenja yakho.
Uma ungazizwa ucasulwa yisikhathi esincane senja yakho, bese uthathe ikhefu bese ubuya emuva kwesikhathi.
Ekuqaleni koqeqesho, qiniseka ukuthi uqinisa kakhulu inja yakho ngokuziphatha ngaphandle, ikakhulukazi ekuziphatheni okufana nokukhumbula.
Ukusebenzisa impempe nokuchofoza kungazuzisa njengoba kuzwakala kakhulu futhi kucacile kunokumemeza.
Impempe ingasetshenziswa njengendlela yokubonisa ukukhombisa ukuthi ufuna inja yakho ibuye nini, nokuqiniswa okuningi ekubuyeni kuzoholela enja ejabulayo, elalelayo.
Gcina izikhathi zokuqeqesha zifushane, kungabi ngaphezu kwemizuzu emihlanu, izikhathi ezine noma ezinhlanu ngosuku.
Waziwa njengenja enempilo kakhulu, i-Mountain Feist, efanayo ne- Inja yeRussia Bear futhi yonke inhlobo enkulu yezinja, inezimo ezimbalwa ezizuzwe njengefa noma izisekelo ezibhekiswe ezindabeni zezempilo.
Inkinga enkulu yezinja ze-Feist yi-hip ne-elbow dysplasia. Lesi simo yisimo sokuthuthuka lapho uqwanga lukhula khona ngokungeyikho ejoyintini, lubangele ubuhlungu lapho luhamba.
Amacala amancane we-hip noma i-elbow dysplasia angalashwa ngemithi elwa nokuvuvukala, noma kunjalo, izimo ezimbi kakhulu zizodinga ukuhlinzwa okulungisayo, okungenzeka kube kudokotela wezilwane onguchwepheshe.
Kwesinye isikhathi lezi zinja ziye zaziwa ngokungezwani nezinto zesimo semvelo, njengokuphendula kwesikhumba (okwaziwa kangcono njenge-allergen dermatitis).
I-Mountain Feists nayo ingahlakulela ukungezwani komzimba nezinye izinto ezifana nempova, noma ngisho nokwaliwa ukudla kubangela i-anaphylaxis.
Kungumqondo omuhle ukuthola ukuhlolwa kokungezwani komzimba nodokotela wezilwane ukuze ukhiphe noma yikuphi ukungezwani komzimba okungathi sína.
Ngenxa yezinkinga zabo zezempilo ezimbalwa, ngokwesilinganiso i-Mountain Feist inesikhathi sokuphila esiphakathi kweminyaka eyi-13 nengu-18!
Njengoba kushiwo ngaphambili, i-Mountain Feists ivame ukuphutha nge-Jack Russell Terrier.
Kulula ukutshela umehluko phakathi kwalokhu okubili, uma wazi kanjani. I-Mountain Feists inengubo ethambile, imilenze emide nomsila omfushane kuneJack Russell Terrier.
I-Mountain Feist inekhanda le-mesocephalic, umzimba onemisipha enhle, izindlebe ezingunxantathu nomsila oqinile. Ukuhamba kwabo kuvame ukuchazwa ngokuthi 'akunamzamo', kuhamba ngomusa futhi ubuqili benja yokuzingela .
Ukufakwa kwemisila kungumkhuba ovamile eMountain Feist, kepha uma ushiywe ungavaliwe, umsila mude futhi unemisipha.
Enye yezinto eziyingqayizivele ye-Mountain Feist yikhono labo lokuhamba cishe bathule. Ikhono labo lemvelo lokuzingela inyamazane cishe buthule kusho ukuthi bazobe bekwazi kakhulu ukukunyonyobela!
I-Mountain Feist itholakala ngemibala eminingi kufaka phakathi:
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi izindlebe zeMountain Feist zingenye zezici ezichazayo; kumele ziqonde futhi zikhombe.
Uma zimile futhi ziyindilinga, zinguhlobo oluhlukile (kodwa oluhlukile) olwaziwa njengesihlahla esisheshayo.
Izindlebe ezigoqiwe nezifloppy ziphakamisa ukuthi yi-Mountain Cur encane, ngokungafani ne-Mountain Feist, noma ukuxubana (ungabona ezinye zezingxube kule ndatshana).
I-Mountain Feists ichithe unyaka wonke. Noma kungenjalo kuphela, izinwele zabo zivame ukuba nemibala ekhanyayo futhi ngenxa yalokho zibonakala kakhulu.
Okuphambili ukuthi izinwele zimfushane, ngakho-ke izinwele ezincanyana ziyachitheka, uma kuqhathaniswa nezinhlobo ezinkulu zezinja .
Okunye ukubheka phezulu kwengubo emfushane ukuthi ukunqampula akubalulekile ngalezi zinja. Ukuxubha kufanele kwenziwe masonto onke ngezizathu ezimbili:
Ukuxubha kusiza ukususa isikhumba esifile, kuvuse izinwele zezinwele futhi kwenze noboya bucwebezele
Ukuzilungisa kungukuhlangana kwakho nenja yakho, futhi kunikeza ithuba lokuthi ubuhlobo bakho nenja yakho bukhule
Njengezihlobo zabo zeCur, lezi zinja zinesikhumba esibucayi ngakho-ke ukugeza kufanele kugcinwe okungenani, njalo ezinyangeni ezimbalwa noma lapho inja yakho ingcoliswe kakhulu.
Lapho ukugeza kungenakugwenywa, sebenzisa i-shampoo enemithi futhi uqiniseke ukuthi ijazi lomiswe kahle.
Uma ufuna inja esebenzayo enamandla futhi enobungane enhle nezingane ngakho-ke ungathengiswa kwi-Mountain Feist.
Badinga ukukhuthazwa okuningi, kokubili ngokomzimba nangokwengqondo.
Ukuba ne-Mountain Feist kudinga isikhathi esiningi esinikelwe ukuzivocavoca inja yakho, ekuhambeni nasekudlaleni nasekuqeqesheni.
Ungathola ukuthi ukuthola i-Mountain Feist kunzima kakhulu njengoba kuvame ukudideka nezinye izinhlobo zezinja futhi babe nedamu elincane kakhulu lokuzalela.
I-Mountain Feist eyiqiniso iyoba nezindlebe ezikhonjiwe, eziqondile, ubuso obunesikwele, isikwele nomzimba nejazi elithambile. Made kunoJack Russells, anemilenze emide nemisila emifushane.
Ngokungafani nezinye izinhlobo ze-terrier , bahlala kahle nabantu abasha nezinja.
Futhi ziguquguquka kalula emvelweni, inqobo nje uma zihlala, zenza kahle kakhulu ezindaweni zombili zasemadolobheni nezamazwe.
Ngenxa yokujaha imvelo, azenzi kahle emakhaya anamakati, onogwaja, noma yiluphi uhlobo lwamagundane.
Ingabe unayo i-Mountain Feist ekhaya? Shiya njengamazwana asitshela ngeFantastic Feist yakho ngezansi.
Ulwazi lweBernedoodle Inja Yokuzala, Amaqiniso, Isimo Sezulu Nosayizi
umalusi waseJalimane omhlophe nampunga
yini i-texas heeler
amagama amahle ezinja ezimhlophe zabesifazane
inja yebhere yomnyama nomhlophe